Ciidamada militariga Turkiga oo sheegay in ay talada dalka la wareegeen - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldCiidamada militariga Turkiga oo sheegay in ay talada dalka la wareegeen
Ciidamada militariga Turkiga oo sheegay in ay talada dalka la wareegeen
July 15, 2016 Abdi Omar Bile World 0
Ciidamada militariga oo la soo dhoobay Istanbul. Sawirka: Reuters.
Koox ciidamo Turki ah ayaa sheegay in ay talada dalka la wareegeen, iyadoo meelaha muhiimka ah ee Istanbul askar la dhigay, diyaarado jog hoose ku duulayana ay dul heehaabayaan caasimada, Ankara.
Bayaan laga sii daayay taleefishinka ayaa lagu sheegay “guddi nabad ah” in ay maanta dalka qabteen ayna jiri doonaan sharciyo militari oo lagu dhaqmayo.
Wali ma cadda cidda ay yihiin kooxda askarta ah. Waxaa jira warar sheegaya in saraakiil sare la xiray.
Madaxweyne Rajib Dayib Erdogan waxaa uu sheegay inuu soo afjari doono waxa uu ugu yeeray dad tiro yar oo kacdoon sameeyay.
Mr Erdogan ayaa dadka shacabka ah ugu yeeray in ay u soo baxaan wadooyinka ayna ka hortagaan kacdoonka.
Wuxuu yiri “ Waxaan ka codsanayaa dadka Turkiga in ay isugu yimaadaan meelaha barxadaha iyo garoomada. Marna aamini mayo awood ka badan tan dadka shacabka ah.”
Mr. Erdogan ayaa sheegay inuu kusii jeedo Ankara kuwa ku lug leh ficilkana ay mudan doonaan ciqaab culus.
RW Turkiga Binali Yildirim ayaa cambaareeyay “Ficilka xun” ee kooxda militariga ah, isagoo carabka ku adkeeyay in uusan ahayn afgembi. Wuxuu sheegay in dowlada ay xukunka wali hayso.
Wixii war ah oo soo kordha isha ku hay Puntland Mirror.
Somali President Hassan Sheikh Mohamud condemns lorry terror attack in France
Madaxweyne Erdogan oo ku tilmaamay isku dayga afgembiga ‘fal khaa’inul waddanimo’
UN representative for Somalia warns Puntland-Somaliland tension could cause violence
Garowe-(Puntland Mirror) UN representative for Somalia has warned that escalating tension between Puntland and Somaliland over Sool region could lead violence. “There is a serious danger that long-standing disputes between Puntland and Somaliland, and in [...]
Madaxweyne Cabdiweli ma waxa uu u baxay safar olole?
Garoowe-(Puntland Mirror) Wax ka yar 40 beri ayaa ka harsan muddo shan sanno ah oo Cabdiweli Maxamed Cali uu ahaa Madaxweynaha Puntland. Inkastoo uusan weli si rasmi ah ugu dhawaaqin in uu mar labaad tartamayo, [...]